Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Alietc.com
Macluumaadka Siyaasadda ee dukumiintigaan waxay la xiriirtaa macluumaad kasta oo aad na siiso, shaqsi ahaan iyo ganacsi ahaanba, iyo macluumaadka aan aruurineyno si toos ah ama dhinac saddexaad.
Dhammaan macluumaadka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu waafaqsan yahay sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku xiran yahay isbeddelo iyo wax ka beddelid sidii loo baahdo. Adigoo adeegsanaya bartayada internetka isla markaana ku oggolaaneysa Shuruudaheena iyo Shuruudaheena, waxaad iska diiwaangelineysaa oo aad aqbashay macluumaadka soo socda ee keydinta, wadaagista iyo nidaamka magangelyada sida loo maamulo hoosta ALIETC.com.
Haddii aad ku guuldareysato inaad aqbasho ama aad raacdo siyaasadaha ku qoran dukumiintigan waxay ku dambayn doontaa ka goynta adeegga isla markiiba, ama xannibaadaha koontadaada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan bayaanka siyaasaddeena ama Shuruudo iyo Shuruudo, fadlan la xiriir wakiilka adeegga macaamiisha.
Waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso macluumaadka xiriirka ee looga baahan yahay inaad ku sameyso macaamil ganacsi boggayaga. Iska diiwaangelinta aaladdeena ayaa u baahan shaac ka qaadista magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, cinwaanka shaqada iyo waaxda (haddii ay quseyso).
Waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso macluumaad aqoonsi iyo wax kasta oo laxiriira nooca ganacsigaaga, sida magaca shirkadda, nooca ganacsiga iyo liisanka ganacsiga.
Sharaxa iyo wadaagida macluumaadka
Waxaa suuragal ah inaan u siino macluumaad kasta oo la soo uruuriyay iyo keydinta qaateyaasha soosocda:
Xubnaha kooxda ALIETC iyo shuraakadooda iyo / ama adeeg bixiyeyaasha loo qoondeeyay ee kaashanaya annaga oo ah soo gudbinta alaabada iyo adeegyada.
Shuraakadaheena Ganacsiga - si ay ugu suurta gasho inay kuu soo diraan qiimo dhimis iyo dalabyo
Bixiyeyaasha adeegga lacag bixinta si ay u socodsiiyaan xawaaladaha iyo dejinta iyo hubinta xisaabaadka.
Wakiillada adeegga macaamiisha, si loogu suurogeliyo inay bixiyaan adeegyo iyo kaalin daryeel oo muhiim ah.
Bixiyeyaasha kontoroolka halista, si loo qiimeeyo amniga xisaabaadka isticmaale iyo macaamil ganacsi.
Saraakiisha fulinta sharciga, la-taliyayaasha xirfadda leh, hay'adaha dowladda, caymisyada iyo hay'adaha kale ee sharciyeynta iyagoo u hoggaansamaya shuruucda khuseeya iyo ku dhaqmidda, asaasidda iyo difaaca xuquuqdayada sharciga ah iyo ilaalinta danahaaga muhiimka ah iyo tan dadka kale.
Cookie waa xoogaa yar oo xog ah oo lagu keydiyo kumbuyuutarkaaga kumbuyuutarka adag ee loo maro biraawsarkaaga internetka. Kukiyada ayaa dhigaya ALIETC.com -da waxaa looga baahan yahay inay si hufan u socodsiiyaan degelka si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa bartaada isla markaana ay kugula taliyaan alaabada iyo adeegyada. Kukiyada kulanka ayaa la tirtiraa marba markii aad xidho biraawsarkaaga iyo kukiyadaada joogtada ah ayaa loo isticmaalaa inay ku hubiyaan. ALIETC waxay isticmaashaa labadaba kalfadhiga iyo kuleylka joogtada.
Waxaan haynnaa macluumaadkaaga shaqsi iyo ganacsi ilaa iyo inta aan ilaalinayno xiriir ganacsi oo sharci ah. Waxaa nalaga rabaa inaan sidaas yeelno si aan u gaarsiino alaabada iyo adeegyada sida loogu ballanqaaday bayaankeenna.
Haddii aad go'aansato inaad ku dhammaystirto meheraddaada ALIETC.com isla markaana xirto koontadaada, dhammaan macluumaadka shaqsiyeed iyo shirkadda ayaa laga saari doonaa. ALIETC.com waxay tirtiri doontaa ama tiraahdaa macluumaadka iyada oo kuxiran in koontadaada si joogto ah loo tirtiray ama loo hakiyay (iyada oo ku mataleysa macaamiisha adeegyada ALIETC.com).
Haddii sabab kasta ha noqotee macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ama shirkadda lama tirtiri karo isla markiiba (kiisaska halkaas oo macluumaadka lagu kaydiyay faylasha dambe) macluumaadka la-celin karo waa laga go'doomin doonaa sii wadista illaa u dhammaystirka baabi'inta macluumaadka ay suuragal noqoto.